နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: 91 PC Suite ကိုသုံးပြီး iPhone,iPad, iPod touch တို့ တွင် iTunes မလိုဘဲ App တစ်ခုချင်းစီသွင်းနည်း
91 PC Suite ကိုသုံးပြီး iPhone,iPad, iPod touch တို့ တွင် iTunes မလိုဘဲ App တစ်ခုချင်းစီသွင်းနည်း
iTunes ကနေ Sync လိုက်ရင် နဂိုရှိပြီးသား Apps တွေပျက်သွားမှာစိုးရိမ်းနေတဲ့ ပန်းသီးချစ်သူတွေအတွက် Software တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
91 PC suite for iPhone ပါ။
အဲဒီ Software ကိုသုံးပြီး မိမိ iDevice ထဲကို App တစ်ခုချင်းစီ Drag and Drop ဆွဲထည့်ပြီး install လုပ်လို့ ရပါတယ်။ iTunes လဲ မလိုပါဘူး။ နဂိုရှိပြီးသား Apps တွေလဲ ပျက်မသွားပါဘူး။ ကျွန်တော် Stetp by Step ရှင်းပြသွားပါမယ်။
91 PC Suite မူရင်းက Chinese Version ကြီးပါ။ Language ပြောင်းဖို့ အတွက် အောက်မှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ Screen Shot အတိုင်း System Tray icon ပေါ်မှာ Right Click လုပ်ပြီး English ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
1. အရင်ဆုံး အဲဒီ Software ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။
2. ဒေါင်းပြီးရင် မိမိ ကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ်ပါ။
3. iDevice ကို USB နဲ့ ချိတ်ပြီး အဲဒီ Software ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ မိမိ iDevice သည် Jailbreak လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမည်။)
4. System Tab ထဲကနေ Apps ဆီကိုသွားပါ
5. ဘယ်ဘက်အောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ InstallList ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါ။ အဲဒီထဲကို မိမိသွင်းချင်တဲ့ App.ipa လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါ။ Install လုပ်နေချိန်ကို ခဏစောင့်ပါ။
6. Installation Succeeded ဖြစ်သွားရင် မိမိ iDevice ထဲကို App ရောက်သွားပါပြီ။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 7:36 PM